Sajhasabal.com | Homeसावधान ! कतै तपाईं पनि डिप्रेसनको शिकार पो बन्नुभयो कि ?
टिप्स | विश्व स्वास्थ्य सूचांकले देखाइसकेको छ, ‘डिप्रेसन अब विश्वको लागि टाउको दुखाईको विषय बन्नेछ ।’ अहिले हामी डिप्रेसनको दलदलभित्र फस्दैछौं । हाम्रा घरमा कति सदस्य यस्ता होलान्, जो डिप्रेसनले ग्रस्त छन् । अबको विश्वमा डिप्रेसनले भयावह रुप लिँदैछ । यसको बाछिटा हाम्रो समाजमा पनि परिसकेको छ । हाम्रा वयस्क, युवा, केटाकेटीसमेत डिप्रेसनको रोगी बन्दैछन् ।
जबकी आफ्नो स्वास्थ्यलाई प्रति वेवास्ता गर्ने तथा हेलचक्राई गर्ने व्यक्तिलाई भने रोगको संक्रमण हुने सम्भावना उच्च हुन्छ । आफूलाई शारीरीक र मानिसक रुपमा सबल र स्वस्थ राखेमा कहिल्यै विरामी परिदैन ।
त्यसैले पनि, आफ्नो बच्चालाई अहिलेदेखि नै स्वस्थ जीवन बाँच्न सिकाऔ । यसको लागि आवश्यक परिस्थिति सिर्जना गरौ ।
त्यसैले, आˆनै शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि पनि यो परिस्थिति बनाउन आवश्यक छ । यदी यो कुरामा मन बनाउन सकिन्छ भने अन्य कुरामा पनि यस्तै तरीकाले मन बनाउन सकिन्छ । त्यसैले, समय आइसकेको छ, यो कुरा हामी सबैले बुझ्न जरुरी भैसकेको छ । मानसिक रुपमा, शारीरीक रुपमा रसायनिक रुपमा तथा उर्जाको दृष्टीले पनि तपाईंले यो बुझ्न आवश्यक छ कि विरामी भएर, दुखी भएर वा डिप्रेशनमा परेर बस्नुको कुनै फाइदा छैन । यसले कुनै लाभ पनि मिल्दैन । बरु खुशी, आनन्दपूर्ण तथा उत्साहपूर्ण तरीकाले बाँच्नमा जति फाइदा छ, त्यो अरु कुरामा कतै छैन । र, तपाईंले यो कुरा सबैलाई बताएमा उनीहरुले पनि तपाईसित त्यस्तै व्यवहार गर्न थाल्नेछन् । अनलाइनखबरबाट